'Game of Thrones 70' dia mitondra hetsika Zombie matotra amin'ireo fanjakana fito
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly 'Game of Thrones 70' dia mitondra hetsika Zombie matotra amin'ireo fanjakana fito
by Waylon Jordan Aprily 28, 2019
by Waylon Jordan Aprily 28, 2019 1,015 hevitra
Ireo mpamaky iHorror, tsy matetika isika no mivoaka ivelan'ny karazana antsika mba hiresaka zavatra tsy mampihorohoro ara-teknika, fa aorian'izay Game ny ny seza fiandrianan'ny anio alina, manana zavatra vitsivitsy holazaina isika.
[Tsy misy Spoiler eto ho an'ny mpankafy. Ireo mpanimba hazavana raha tsy narahinao ilay fampisehoana.]
Ireo mpankafy erak'izao tontolo izao dia nivory nijery ny nampanantenaina ny Battle of Winterfell androany hariva, ary fantatray, rehefa niditra, fa ho epic izany. Fantatray fa ho very ny sakaizan'ny mpankafy. Saingy heveriko fa tsy nahalala ny tena mampihorohoro ny andian-tafika fotsy sy mpitaingina fotsy isika.
Mbola miezaka ny miaina ny fofonaiko aho.
Rehefa nanomboka ny fizarana dia nivory ny tafika isan-karazany, niomana hiady, ary vonona ny hidina hiady ho an'i Winterfell rehefa tonga tao anaty haizina, mba hamerimberenana, SWARM of wights.
Ho an'ireo tsy manam-pahaizana dia misy fahasamihafana eo amin'ny White Walkers sy Wights.
White Walkers dia olona tsy misy olombelona manana hery matotra izay afaka manangana ny maty ary vita amin'ny zavatra toy ny ranomandry ny hodiny. Ny valim-pitia dia ny vatan'olombelona namboarina izay manao izay asain'ny White Walkers sy ny Mpanjaka alina indrindra manafatra azy ireo.
Tsy mbola nahita zavatra toy ny hitako tamin'ny fizarana androany hariva aho hatramin'ny voalohany nijereko Ny Ady Lehibe Z. Ireo no isa marobe sy ny hafanam-pitenenana resahintsika eto, afa-tsy ny nampiakatra ny ante ihany koa tamin'ny alàlan'ny fananana DRAGON'ANDRIAMANITRA MAHARITRA izay mandrora afo manga ihany koa.
Ampy izay ny nanala ny filan'ny mpankafy horohoro fatratra ra, gore ary zombie ary nampatahotra sy nampivadi-po kokoa noho ny zavatra hafa rehetra izany. The Walking dead nanome antsika fotoana fohy, ankehitriny.
Na ireo mpikirakira aza dia naneho hevitra fa tsy mampientanentana ny mahita ireo andiany fantany sy tian'izy ireo hivadika ho sete mahatsiravina ao amin'ny recap aorian'ny fizarana.
Tsy vao sambany nisesisesy ireo andian-dahatsoratra tao amin'ilay karazana horohoro. Betsaka no naneho hevitra fa ilay toetra fantatra amin'ny anarana hoe Mountain dia zavaboary mendrika azy amin'ny ankapobeny Frankenstein, ary ny herisetra an-tsehatra dia mifanohitra amin'ny ankafizin'ny horohoro maro.
Rehefa mipetrapetraka miala sasatra ny mpankafy aorian'ny fampisehoana, ary mieritreritra hoe iza no maty, iza no velona ary inona ny manaraka, izahay eto iHorror dia mizara vera misy fizarana miaraka amin'ny fahalalam-pomba natolotr'i The High Kings.